Reuzel - Matte Texture Powder | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Matte Texture Powder
Regular price MMK 41,000
Default Title - MMK 41,000 MMK
အမျိုးအစား: ဆံပင်ပုံသွင်း Hair Styling Powder
--High Volume | High Texture | No Shine--
သင့်ဆံပင်ကေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပါး ပုံကျနေစေမယ့် အမျိုးအစားအသစ်...
Reuzel - Matte Texture Powder သည် ဆံပင်ကိုအရောင်တောက်စေခြင်းမရှိပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သဘာဝကျကျ Natural Matte Finish ပုံစံများကို လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပုံသွင်း‌စေနိုင်သော Hair Styling Powder ဖြစ်ပါသည်။ Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အလွယ်တကူအပြင်ကိုသယ်ယူသွားနိုင်သောဘူးဒီဇိုင်းနှင့် အချိန်နေရာမရွေး ခန့်ညားမှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပေးပြီး၊ လက်နှင့်အသာအယာဖွလိုက်ရုံဖြင့် ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲဖြစ်စေကာ၊ Volume ကောင်းကောင်းနှင့် Texture အရေးအကြောင်း များကောင်းကောင်းရစေပါသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး လွယ်လွယ်ကူကူဆံပင်ကိုပုံကျစေရုံသာမက ဦးရေပြား အဆီထွက်များသူတို့အတွက် အဆီပြန်ခြင်းလျော့နည်းစေမည့် Dry Shampoo အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ဆံပင်ပါးသူတို့အတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး၊ ဆံပင်အတိုနှင့် အနေတော်ရှိသူတို့အတွက် ခေတ်ပေါ်ဆံပင်ပုံစံများရစေနိုင်ကာ ဆံပင်အရှည်ရှိသူတို့အတွက်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံများပေးစွမ်းနိုင်မည့် အမျိုးသားများ ရှိထားသင့်သောအသုံးအဆောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Reuzel - Matte Texture Powder ကို ဆံပင်ခြောက်သွေ့နေချိန်တွင် ဆံပင်အမြစ်ထဲတို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပေး၍ (သို့မဟုတ်) လက်ပေါ်သို့တင်ပေးပြီး အလွယ်တကူပုံသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်အသုံးပြုရုံသာမက သင်နှစ်သက်ရာခေါင်းလိမ်းဆီတစ်မျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်ပြီးလည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။
လွယ်လွယ်ကူကူ လျင်လျင်မြန်မြန် ဆံပင်ပုံသွင်းစေနိုင်ခြင်း
ဆံပင်အရောင်မတောက်စေသည့် Matte Finish
ဆံပင်ကို Volume ထူထူထဲထဲရှိစေခြင်း
15g ဘူး size
Dustasprinkle of this men's hair volumizing powder along your scalp before styling. You’ll get extra texture withaweightless feel. And if you want to add volume throughout the day, you go right ahead. Keepatin of this hair texture powder in your pocket so you’re at peak pompadour when you hit the bar tonight.
Want more volume thanarock n’ roll concert? Here’satip. After blow drying, cocktail in some Reuzel Surf Tonic Then apply the matte texture hair style powder from scalp to tips for instant lift.
Create your hairstyle inafew seconds
Re-stylable anytime, anywhere
Provides great volume and great texture
Gives flexible hold, apply more powder for more hold